बेलायतमा महिनाकाे ४ लाख तलब पाउने गरी १० हजार नर्स पठाउने प्रक्रिया सुरु !
June 13, 2022 N88LeaveaComment on बेलायतमा महिनाकाे ४ लाख तलब पाउने गरी १० हजार नर्स पठाउने प्रक्रिया सुरु !
काठमाडौं । सरकारले बेलायतमा मासिक करिब ४ लाख तलब प्राप्त हुने गरी रोजगारीका लागि नेपाली नागरिक पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको बताएको छ । बजेटको मन्त्रालयतगत शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले १० हजार जनशक्ति बेलायत पठाउने गरी सम्झौता गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार बेलायतमा […]
जे बर मागे पनि पूरा हुने मनकामना माताकाे दर्शन गरी हेर्नुस् जेठ ३१ गते मंगलबारकाे राशिफल !
June 13, 2022 N88LeaveaComment on जे बर मागे पनि पूरा हुने मनकामना माताकाे दर्शन गरी हेर्नुस् जेठ ३१ गते मंगलबारकाे राशिफल !
मेष राशि : लाभको अवसर आउनेछ। रोजगारी बढ्नेछ। साथीहरूलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्नेछ। व्यापार व्यावसायमा लाभ हुनेछ । शेयर बजारमा बुद्धिमानीपूर्वक लगानी गर्नुहोस्। पीडा, डर, चिन्ता र तनावको वातावरण बन्न सक्छ। अभद्र व्यवहारका कारण घाटा हुनेछ । कम मेहनतमा सफलता मिल्नेछ । वृष राशि : जोखिम मोल्ने साहस गर्न सकिनेछ । आम्दानी जारी […]
June 13, 2022 N88LeaveaComment on भूकम्पको धक्का महसुस
काठमाडौं । तिब्बतको जिजाङमा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। सोमबार बिहान ४ बजेर १६ मिनेटमा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको हो। स्थानीय समाचार माध्यमहरुका अनुसार ४.२ रेक्टर स्केलको भूकम्प मापन गरिएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। महानगरले तीन दिन भित्र ‘ब्रुमर’ सञ्चालनमा ल्याउने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले तीन दिन भित्रमा यान्त्रिक कुचो (ब्रुमर) सञ्चालनमा ल्याइने बताएका […]